Apple waxay qorsheyneysaa inay balaadhiso Fifth Avenue Apple Store | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay qorsheyneysaa inay ku ballaariso Dukaankeeda Apple wadada Fifth Avenue
Apple waxay raadineysaa inay balaariso Apple Store astaanta fagaaraha Wadada Shanaad ee magaalada New York, sida lagu sheegay warbixin cusub. Shirkadda ayaa sheegtay inay raadineyso inay dhisto "Qayb ama dhammaan" oo ka mid ah 61.000 oo laba jibbaaran (qiyaastii 5.667 mitir murabac ah) oo ku yaal dhismaha GM (Fifth Avenue), laakiin sida muuqata ma doonayo inuu bixiyo qiimo buuxa in dib-u-habeynta ay keenayso.
Kaliya maahan dukaanka caanka ah ee Apple Fifth Avenue mid kamid ah kuwa ugu mashquulka badan, sidoo kale wuxuu noqday a soo jiidashada dalxiiska weyn kuwa Apple jecel. Dad badan oo soo booqdayaal ah ayaa yimaada maalin kasta oo Apple hadda rabto inay ballaariso Apple Store, sida ay sheegtay 'New York Post'.
In kasta oo ay rabto inay fuliso dib-u-habeynta, Apple waxay qorsheyneysaa inay si ku-meel-gaar ah u sameyso. "Laakiin dhibaato ayaa jirta marka ay timaado ballaarinta joogtada ah"ayuu raaciyay warbixinta. "Apple ma rabto inay bixiso culeyska sicirkaas maxaa yeelay waxay dareemeysaa inay xaq u leedahay, maadaama ay tahay goob dalxiis oo caalami ah."
Dhismaha waxaa iska leh 'GM Boston Properties', oo leh maalgashadeyaal waaweyn iyo saamileyaal. Tani waxay ka dhigan tahay inaadan kaliya u oggolaan karin dalabaadka Apple, laakiin waad dalban kartaa qiimahaas.
Aaggaas Manhattan, oo aan raqiis ahayn sidaad u maleyn karto, booska dabaqa hoose wuxuu u dhexeeyaa $ 2.700 a $ 4.450 halkii dhudhun (0,092903 mitir murabac), iyo dhismaha GM ayaa leh 1.207 mitir murabac oo dabaqa hoose ah. Taasi waxay ka dhigan tahay inay aad qaali ugu noqon doonto Apple, xitaa qiimo jaban.
Nike waxaa la rumeysan yahay inay sidoo kale xiiseyneyso booska, laakiin muhiim ma noqon doonto ilaa 2020, markii heshiiskaaga kiradu dhammaado. Taasi waxay siin doontaa Apple waqti si kumeelgaar ah u beddel ku yiri dib u habeyn oo ay ku fidiso ballaadhinta Fifth Avenue.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Store » Apple waxay qorsheyneysaa inay ku ballaariso Dukaankeeda Apple wadada Fifth Avenue
Isku mashquul WWII 'Battlestations: Pacific', oo iib ah waqti xaddidan
New patent kiiboodhka Apple, OS X 10.11.5, dukaamo cusub oo Hindiya ah, Maalinta Helitaanka iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac